Wasiirkii hore ee Amniga Puntland oo sabab aan la aqoon ugu geeriyooday Garoowe – AfmoNews
Wasiirkii hore ee Amniga Puntland oo sabab aan la aqoon ugu geeriyooday Garoowe
Wasiirkii hore ee Wasaaradda Amniga Puntland, Axmed Cabdullaahi Yuusuf (Axmed Dowlad) ayaa xalay ku geeriyooday Magaalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugaal.
Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka tacsiyadeeyay geerida naxdinta leh ee ku timid marxuum Axmed Cabdullaahi Yuusuf.
Qoraal ka soo baxay Madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri “Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullahi Deni oo ku hadlaaya magaciisa, kan shacabka Puntland iyo kan Dowladdaba waxa uu ka tacsiyaynayaa geerida Alle naxariistii Janno haka waraabiyee Wasiirkii Hore ee Wasaaradda Amniga iyo DDR-ta Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf (Dowlad).”
“Madaxweynaha Puntland waxa uu tiiraanyada geerida Wasiirka la wadaagayaa ummadda Soomaaliyeed, Shacabka Puntland, eheladii, qaraabadii, asxaabtii iyo qoyskii uu ka baxay marxuumku, waxa uu Alle uga baryayaa inuu dembigiisa dhaafo, su’aasha qabriga u sakhiro , Jannatul fardawsana ka waraabiyo, samir iyo iimaanna ka siiyo eheladiisii.”
Ma cadda sababta geeridiisa, ha yeeshee Sabtidii ayuu qayb ka ahaa xubno Magaalada Garoowe ku soo dhaweeyay Musharax Madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle.
Axmed Dowlad ayaa ka mid ahaa Maamulkii Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, labadii sano ee ugu dambeysay.